Kedu ihe bụ oge oyi nke nuklia? | Network Meteorology
Wepu si na ihe nkiri «La Carretera»
O nwere ike ịbụ na anyị ekwutala okwu a "oge oyi nke nuklia" n'oge ụfọdụ, n'ihi nsonaazụ dị egwu ma ọ bụ nke ihu igwe. Ọmụmaatụ, ihe atụ anya nwere ike ime ma ọ bụrụ na Campi Flegrei supervolcano. Nzuzo a mberede nke mbara ala ga-ata ahụhụ ga-enwe nnukwu myirịta na oge oyi nuklia. Ma gịnị ka ọ bụ n'ezie?
Typedị oyi a bụ echiche nke mejupụtara oge ihu igwe na-akpata nke ga-adịgide mgbe agha nuklia gasịrị. Nsonaazụ ga-adị oke egwu na ihe a na-akpọ "karama" ga-ebili. N'ụzọ siri ike, ọ bụ nkwụsị ngwa ngwa nke akụkụ ma ọ bụ akụkụ akụkụ nke otu ụdị ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ mmadụ. Ihe omume a na - ebute ihe a na - akpọ "nfefe mkpụrụ ndụ ihe nketa" nke kwa, na-emegide mgbanwe nke ụdị. Ọ bụ nsonaazụ dị ka mmeghachi olu nke a na-agaghị azọpụta ụdị ọ bụla, na nke ọbụna ụmụ mmadụ gafere na akụkọ ntolite ha.
1 Nsonaazụ nke oge oyi nuklia
2 Kedu ka esi eme mkpọtụ?
2.1 Olee mgbe ụmụ mmadụ hụrụ ya?
Nsonaazụ nke oge oyi nuklia
Na nkenke, oge oyi nke nuklia bụ ihe ịtụnanya sitere na ojiji nke ogbunigwe nuklia aghara aghara. Nzuzo zuru ụwa ọnụ ga-abịa site na nnukwu urukpuru ájá nke ga-ebili na stratosphere. Mpaghara a, nke dị n'agbata 10 na 50 kilomita, ga-ejupụta na ihe ga-egbochi igafere nke ìhè anyanwụ. Ọbụghị naanị na agha ya na ogbunigwe atọm, ọ na-esote na supervolcano ga-enwekwa otu ihe ahụ n'ihi nnukwu ogidi nke ihe eji eme ka ọ dị elu.
N'adịghị ka oge oyi oge anyị nwere ike ịma, nke a ga-ebute mbelata nbanye nke ìhè anyanwụ. Maka ihe dị ndụ nke na-ebu fotoynthesis, ọ ga-apụta mkpokọta ma ọ bụ akụkụ akụkụ nke ụdị ahụ. Ihe ọzọ a na-atụghị anya ya bụ na, n'agbanyeghị na amaara ya na nsonaazụ ya ga-emebi, igwe ojii ahụ nwee ike nọrọ n’eluigwe ọtụtụ ọnwa. Kedu ọtụtụ ndị ọzọ, mmebi ọzọ nke usoro okike. Site na ọnwụ nke osisi, ọ ga-abịa mgbe ya onwe ya gasịrị, ebili mmiri nke ikpochapu na-eso usoro nri. Mgbe osisi ahụ gasịrị, ahịhịa na-abịa n’azụ ha, anụ na-erikwa ha n’azụ. Ọ ga-ekwe omume na dabere na ịdị ukwuu ya na mpaghara ya, ikuku a na-apụghị ịkọwapụta n’onwe ya mere ka ụmụ anụmanụ nwụọ ozugbo na mpaghara. Dị ka ụfọdụ echiche si kwuo, e jirila ihe a mee ihe dị ka nkọwa maka ikpochapu dinosaurs site na meteorite nke kpatara mmetụta yiri ya.
Kedu ka esi eme mkpọtụ?
"Mkpu-mmiri" bụ okwu eji arụ ọrụ na ihe ọmụmụ nke ihe ọmụmụ banyere oge gara aga ebe, site na ọtụtụ ihe omume, ọnụọgụ ụmụ anụmanụ belatara nke ukwuu n'ọnụ ọgụgụ na-anwụ anwụ. Ihe kpatara ya jiri buru ihe ndi ozo na-esonyere ya. Yabụ mgbe anyị nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke nwere nnukwu mgbanwe mkpụrụ ndụ ihe nketa, ugbu a ọ pere mpe na obere mgbanwe.
Ihe ndị a niile na - eduga na nwepu na obere mgbanwe dị iche iche na - eduga na a mkpụrụ ndụ ihe nketa, n'ihi ọkachamara na mgbanwe mgbanwe. Na nke ọ bụla n'ime ndekọ ndị e dekọrọ, ọ dịla otú ahụ. Ndị lanarịrị ọdachi ndị a, dị ka oge oyi nuklia, na-eme ka ngwa ngwa nke ndụ ha na-agbanwe ngwa ngwa, si otú a na-emepụta ụdị ụdị ọhụrụ. Ọtụtụ mkpụrụ ndụ ihe nketa (ma ọ bụ ike) mkpụrụ ndụ ihe nketa na-eme ka ọ kwụsie ike ma na-aga n'ihu, ndị na-esighị ike ma ọ bụ ndị pere mpe ga-anwụ.
Olee mgbe ụmụ mmadụ hụrụ ya?
Afọ 75.000 gara aga. A maara dị ka ọdachi Toba, supervolcano a hụrụ na Indonesia gbawara. Ọ bụ ọdọ ugbu a n'ihi nnukwu ndagwurugwu ahụ. A na-eme atụmatụ na ụdị mmadụ belatara puku mmadụ ole na ole. Tụkwasị na nke ahụ, mgbanwe na-agbanwe agbanwe n'ụdị ndị ọzọ na-adaba n'otu oge ahụ.
Ọ bụ ezie na anyị kwurula banyere ugwu mgbawa, n'ihi mmekọrịta ha na oge oyi ikuku nuklia, ihe mgbochi dị iche iche. Nke ahụ bụ, ha nwere ike ọ bụghị naanị site na mmetụta nke ihu igwe, mana na-efe efe ma ọ bụ ọrịa na-efe efe. Otu ihe atụ, ọrịa ojii nke biri na Middle Europe. Ma ọ bụ karịa, dị ka mgbawa, ụnwụ nri na ọrịa dịka ọ mere na Iceland na ntiwapụ nke Ọdọ na 1783.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Kedu ihe bụ oge oyi nke nuklia?